I-gemology yokufunda-ikhosi yeGemology-Uhlaziyo olutsha olukhoyo 2021
Ezintsha : Funda i-gemology kwi-intanethi
Ngenxa yemfuno enkulu evela kubafundi bethu abangakwaziyo ukuhamba ukusukela nge-Matshi 2020, ngoku kunokwenzeka ukuba bafunde kwi-Intanethi.
Sisebenzisa isoftware eyahlukileyo ukufundisa ngenkqubo yeekhamera ezininzi: Zoom, Skype, WeChat, WhatsApp… Singasebenzisa nayiphi na enye isoftware ngokokhetho lwakho.
Sifundisa i-gemology ngesiNgesi okanye ngolwimi lwesiFrentshi
Synthetic & unyango
Amaxabiso kunye nokuhlelwa
I-Gemology yisayensi yezixhobo zegem, kunye nehlumelo elikhethekileyo lesebe elidala lezesayensi yezimbiwa. Study gemology igubungela yonke imiba yobugcisa yamatye anqabileyo kunye nezinto zegem.
Iikhemikhali, ezomzimba kunye nezinto ezibonakalayo, ubuchwephesha obusetyenziselwa ukulinganisa izinto kunye nezinto zokwenza izinto, ukusika nokupholisha amatye anqabileyo, kwaye okona kubaluleke ngakumbi ziindlela zekhosi yejemology kunye nezixhobo eziqeshwe ekuchongeni, ukulinganisa kunye nokuxabisa amatye anqabileyo.
Igama elithi 'gem material' ligubungela uluhlu olukhulu lwamathuba. Uninzi lwezixhobo zegem zizimbiwa, kodwa kwi-3000 okanye kunjalo, izimbiwa ezaziwa ngumntu, kuphela malunga neentsapho ezingama-70 / amatye angama-500 athathelwa ingqalelo eneempawu ezinxulunyaniswe nolo didi lukhethekileyo lubizwa ngokuba ngamatye anqabileyo.
Umntu we-1: $ 400
2 kumntu we-4: i-240 $ / umntu ngamnye
Umntu we-5 +: 200 $ / umntu ngamnye
* Amaxabiso anxibelelana kuphela nenani lomntu kubhukisho lwakho * Ukubhukisha ubuncinci iiveki ze-2 ngaphambi kwexesha Ndiyacela Qhagamshelana nathi ukubhukisha.
Ungaweli njani kumgibe wabathengisi bezinto zexabiso zamatye? Ungawamkela njani amatye endalo, i-synthetics, unyango? Ungawuthelekisa njani umgangatho kunye namaxabiso? Uya kufumana iimpendulo kuyo yonke imibuzo yakho ngeli xesha iklasi
Inkqubo yeklasi ibandakanya:
Iintsapho zamatye anqabileyo
Ukuzaliswa kweglasi / ukugcwalisa kwe Fracture / Ukupholisa umkhuhlane
Shiya iklasi ngokuqonda okuphezulu apho kuvela khona amatye anqabileyo kunye nendlela yokuchonga ngempumelelo imiba eyahlukeneyo yabo.
UNJingalwazi uGqirha MOHAMED MOHAMED TOLBA SAID ugqibe ikhosi yoqeqesho kwi-gemology. Usuku olu-1 (iiyure eziyi-6) “Ngomhla we-15 ku-Epreli ngo-2015 ndandichithe usuku olunomdla nolunomdla kakhulu lokufunda ikhosi ye-gemological e-Gemological Institute of Cambodia, uMnu. Ndicinga ukuba i-Gemological Institute of Cambodia yeyona ndawo ifanelekileyo yokufumana ulwazi malunga negemology kunye namatye anqabileyo. ”
UMnu SERGIO (wase-Italiya) kunye noNks WIRIYA (waseThailand) bayigqibile ikhosi yoqeqesho kwi-gemology. Usuku lwesiqingatha (iiyure ezi-3) “UPhilippe il proprietario è una persona molto competente e professionale nel campo della gemmologia, noi abbiamo fatto un corso di mezza giornata in cui ci ha introdotto nel mondo delle gemme.ha una showroom notevole di gemme autentiche cambogiane e non… insomma se volete comprare compini e zaffiri veri birmani recatevi da Philippe è il n ° 1 a Siem isivune. Inoltre se volte ”- Meyi 5, 2015
Umnumzana CARL (waseNgilane) kunye noNks AGYNESS (wase China) bagqibe ikhosi yoqeqesho kwi-gemology. Usuku olu-1 (iiyure eziyi-6) Julayi 30, 2015
UMnu Toh Hock An (waseTaiwan) ugqibe ikhosi yoqeqesho kwi-gemology. Usuku lwesiqingatha (iiyure ezi-3) Nge-15 ka-Agasti ka-2015
Master Hanz gcua (wasePhilippines) ugqibe ikhosi yoqeqesho kwi-gemology. Usuku lwesiqingatha (iiyure ezi-3) Oktobha 15, 2015
Unksz Ramya Ponnada kunye noMnu Krishna Kanth Ponnada (wase-India) bagqibe ikhosi yoqeqesho kwi-gemology. Usuku lwesiqingatha (iiyure ezi-3) NgoNovemba 12, 2015
UMnu Sonny Rodriguez kunye noNks Tiffany Rodriguez (wasePhilippines) bagqibe ikhosi yoqeqesho kwi-gemology. Usuku lwesiqingatha (iiyure ezi-3)"Ukuba ufuna amatye anqabileyo, yiya apha" - bendifuna iimpendulo malunga namatye ayigugu athengiswe kwimarike yakudala kwaye le ndawo indinike lonke ulwazi endiludingayo ukuze ndibazi ngokukodwa ubunyani. Kuyabonakala ukuba uninzi lweevenkile zexabiso kwimarike ziya kukuthengisa ezingezizo.
Ndibhalise kwiworkshop ye3hour kwaye ngokuqinisekileyo iyalwandisa ulwazi lwam malunga namatye anqabileyo. Bandinika isatifikethi emva koko kwaye yayili-3hours efanelekileyo. UMnu Jean unomdla ngokwenene ngamatye anqabileyo. Jonga iwebhusayithi yabo, nxibelelana nabo kwaye baya kuba ne-tuk-tuk bakulande kwihotele yakho. Ngayiphi na imeko awunamdla wokufunda iigugu ndwendwela nje kwaye ubone amatye anqabileyo afumanekayo ngokulula-ngoNovemba 12, 2015
UMnu Thorstein noMnu Widar (waseNorway) bagqibe ikhosi yoqeqesho kwi-gemology. Usuku lwesiqingatha (iiyure ezi-3) NgoNovemba 16, 2015
UTom noKristin (wase-USA) kunye noNorma noTrevor (waseCanada) bayigqibile ikhosi yoqeqesho kwi-gemology. Novemba 22, 2015
Konstantin noSilviya (waseBulgaria). Novemba 28, 2015
Miles, Julayi, Rosie, Tilly & Celeste (waseNgilani). Disemba 22, 2015
UNks Lee Hui Yun (waseSingapore). Disemba 23, 2015
UAnnick noMaxim (base-Australia). Disemba 28, 2015
UJasmine, uBruce kunye noAllan (basePhilippines). Disemba 29, 2015
UAnn noMariya January 8, 2016
UMarc noLani, abavela eLos Angeles, eCalifornia, e-USA January 10, 2016
UNks uRute, ukusuka Indonesia January 12, 2016
UMnu Jeff, ukusuka USA January 13, 2016
UStephanie kunye noMason, abavela eHong Kong January 21, 2016
UAnna noDiana, baseRussia Februwari 4, 2016
Sok heng, Pui San, Chiew Sum & Sing Kwan, waseMalaysia "Ukutyelela okumangalisayo - umdla kunye nokuvula kwamehlo" -Indawo entle yokundwendwela! Sithathe isifundo seyure e-1, esiphele ukuba sibe silixa elide ngenxa yemali enkulu yolwazi ekwabelwana ngayo nguJean. UJean wayemhle ngokungachazi nje iintlobo ezahlukeneyo zamatye, kodwa wayelungile ekubuyiseni ebomini kumxholo waseCambodia kunye namabali amnandi kakhulu. Imiboniso emikhulu kakhulu elabhoratri apho ufumana khona ukubona iintlobo ezahlukeneyo zexabiso kwaye uzame ukuqonda ukuba yeyiphi eyinyani, inyangiweyo okanye eyenziweyo! Kukwakho nokukhethwa okuhle kweeGugu zaseCambodian zasekuhlaleni ukuthenga ngamaxabiso afanelekileyo emva kwesifundo. Ufunde okuninzi, wonwaba kakhulu kwaye ushiye igugu elihle laseCambodia kunye noxabiso olutsha olufunyenweyo lwegemology! -Februwari 5, 2016
UNikolas, uChristodoulos kunye noDespoina, waseGrisi Februwari 7, 2016
UNks Katherine, eSpeyin, iye yagqitywa le khosi yoqeqesho gemology. Februwari 10, 2016
UNaho, waseJapan noWilliam, wase-UK, uyigqibile ikhosi yoqeqesho kwi-gemology. Februwari 15, 2016
UFilipu, ukusuka eNgilani, iye yagqitywa le khosi yoqeqesho gemology. Februwari 19, 2016
UKnud-Erik, uDorte noDorthe, baseDenmark, bayigqibile ikhosi yoqeqesho kwi-gemology. Februwari 20, 2016
UNks Jerica, ukusuka USA, iye yagqitywa le khosi yoqeqesho gemology. Matshi 4, 2016
UNks Lena, evela eUkraine, iye yagqitywa le khosi yoqeqesho gemology. Ndindwendwele iziko ukuze ndazi ngakumbi ngamatye aseCambodia. Ndimele ukuthi le ndawo yenzelwe bonke-iindwendwe, izikhokelo, iingcali, abathengi. Apha ungabona kwaye 'amava' onke amatye ehlabathi. Ulwazi lucacile, imeko-bume ingummangaliso. Ndingathanda ukubulela uPhilippe ngesifundo esihle-nge-Matshi 14, 2016
Javier & Andrea, evela eNgilani, iye yagqitywa le khosi yoqeqesho gemology. Matshi 24, 2016
UTanya, uSebastian noScott, bayigqibile ikhosi yoqeqesho kwi-gemology. Sithathe unyana wethu oneminyaka eyi-8 ukuya kwikhosi enye yeyure kuba ebenomdla kakhulu kwiigugu, amatye kunye neekristali. UJeanne-Pierre uchithe ngaphezulu lee kweyure ayabelweyo kwaye enolwazi kakhulu kwaye enomdla kumbandela we-gemmology. Unyana wethu wayonwabela kakhulu le khosi, njengoko nathi, ngakumbi iseshoni elabhoratri, echonga ubuncwane obahlukeneyo phantsi kwemicroscope. Wayevuya kukuhamba nesatifikethi kunye nelitye le-Praseolite. Enkosi. -Kwindla 29, 2016
USangita noDaniel, baseNgilani, bayigqibile ikhosi yoqeqesho kwi-gemology Aprili 3, 2016
UHilary noIan, base-Australia, bayigqibile ikhosi yoqeqesho kwi-gemology. Aprili 4, 2016
UMaria noJoanna, bakwiPhilippines, bayigqibile ikhosi ye-gemology kwi-gemology. Wathatha ikhosi yeentsuku zesiqingatha kwiziko le-gemological. Yayifundisa kakhulu! Emva kwale khosi, ngokuqinisekileyo siqinisekile nge-100% malunga nokuvavanya amatye anqabileyo. -U-Epreli 8, 2016
U-O'Malley Family, wase-USA, emva kwekhosi yoqeqesho kwiGemology. Aprili 14, 2016
Silvester & Silvia, ukusuka Australia, iye yagqitywa le khosi yoqeqesho gemology. Ngamana 12, 2016
UNks Akemi, waseJapan, iye yagqitywa le khosi yoqeqesho gemology. Ngamana 15, 2016
Julius, Marieflor, Sandrine, Coleen & Cedric, wasePhilippines, ugqibe ikhosi yoqeqesho kwi-gemology. Ngamana 29, 2016
Ma. ULuz, wasePhilippines, kunye noGordon, wase-UK, bayigqibile ikhosi ye-gemology kwi-gemology. Ngamana 31, 2016
UKatie, u-Edwardo, uJennifer, noJeffrey, base-USA, bayigqibile ikhosi yoqeqesho kwi-gemology. Juni 16, 2016
UJamie no-Ellie, base-USA, bayigqibile ikhosi yoqeqesho kwi-gemology. Julayi 18, 2016
Pauline & Ronan, waseFransi, iye yagqitywa le khosi yoqeqesho gemology. Agasti 1, 2016
Sue, Maureen & Bruce, ukusuka USA, iye yagqitywa le khosi yoqeqesho gemology. Agasti 11, 2016
U-Anne no-Olivier, base-France, bayigqibile ikhosi ye-gemology kwi-gemology. Agasti 18, 2016
UMax & Hester, wase-USA, ugqibe le khosi yoqeqesho gemology. Agasti 19, 2016
UCarrie & Martijn, waseOstreliya, bayigqibile ikhosi yoqeqesho kwi-gemology. Agasti 20, 2016
Katherine, ukusuka Australia, iye yagqitywa le khosi yoqeqesho gemology. NgoSeptemba 8, 2016
Allesha & Ross, ukusuka USA, iye yagqitywa le khosi gemology in gemology. NgoSeptemba 10, 2016
Mr.Thiery, waseFransi, ugqibe ikhosi yoqeqesho iveki enye (iiyure 30) kwi gemology. NgoSeptemba 26-30, 2016
UAli & Joe, ugqibe ikhosi yoqeqesho kwi-gemology. Oktobha 20, 2016
Lenny, umfundi wethu omncinane, waseFransi, iye yagqitywa le khosi yoqeqesho gemology. Oktobha 21, 2016
USteven & Jene, wase-USA, ugqibe le khosi yoqeqesho gemology. Disemba 5, 2016
UFiona no-Shah, baseNgilani, bayigqibile ikhosi ye-gemology kwi-gemology. Disemba 9, 2016
Aislinn & Dominique, waseHong Kong.Disemba 12, 2016
Ndiyacela Qhagamshelana nathi ukubhukisha.